कोरोनाले मानिस भकाभक म’र्न थालेपछि सपना रोका मगरले यस्ता तस्वीर सार्वजनिक गर्दै लेखिन् मार्मिक सन्देश – NepalajaMedia
May 13, 2021 85
अहिले लकडाउन छ । श्रमजीविहरुले काम गुमाएका छन् । अस्पतालमा बिरामीको घुँइचो छ । अक्सिजन र उपचार नपाएर मानिसहरु भकाभक म रि रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा समाजसेवीहरु के गर्दै होलान्? सबैको चासो हुनु स्वभाविक हो । सानै उमेरमा बेवारिसे शव ब्यवस्थापन गरेर चर्चित सपना रोका मगरले केही तस्वीरहरु सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
उनले तस्वीरसँग क्याप्सनमा लेखेकी छिन्, ‘हामि निरन्तर सेवा मै छौ । निशुल्क खान बितरण , रोग र भोक ले कोहि पनि निमुखा नेपालिले अकाल मा ज्यान गुमाउन नपरोस् ।’ उनी हाम्रो सानो प्रयास, हाम्रो टिम नेपाल नामक संस्थासँग आवद्ध भएर भोकाहरुको भोक मेट्न लागिपरेकी छिन् । यसबाहेक बेवारिसे शव ब्यवस्थापनमा पनि उनी उत्तिकै सक्रिय छिन् ।
उनको जीवनमा आएका आरोह अवरोह मत्थर भएपछि चर्चित अभियन्ता सपना रोका मगर काममा फर्केकी थिइन् । बीबीसीको प्रभावशाली १०० जनाको सूचीमा परेकी सपना रोका मगरले आफ्नै संस्थाबाट सामूहिक दा ह सं स्का र समेत सुरु गरेकी छन् ।
अब पढाइसँगै बेवारिसे शव व्यवस्थापनको काममा खटिने उनी बताउँछिन् । यी दुईवटै विषय मेरा लागि उस्तै हुन् । बेवारिसे शव व्यवस्थापन जसले मलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍यायो, पढाइ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अब सँगै अगाडि बढाउँछु ।’ सबै तस्वीर सपनाको फेसबुक पेजबाट
Prevआफन्तको विहेमा हिँडेकी महिलाको कर णी पछी ह त्या, यस्तो अबस्थामा शव मकै बारीमा भेटियो
Nextशनिवार २४ घण्टामा संक्रमित हुने भन्दा निको हुने दोब्बर
प्रेम प्रस्ताव राखेकै कारण यि जोडी क्याम्पसवाट निकालिए
कोरोनाका नाममा लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा हजारौं मानिस माक्स खोलेर सडकमा, ३ सय बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ
विद्यार्थीले परीक्षामा यस्तो जवाफ लेखेपछि जाँच्ने शिक्षक नै बेहोस (25404)
हरेक पुरुषले एक पटक पढ्नै पर्ने ! (7155)